पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ वैशाख २१ गते (सन् २०२१ मे४ तारिख) मंगलबार - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
घर धर्म/संस्कृति पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ वैशाख २१ गते (सन् २०२१ मे४ तारिख)...
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ वैशाख २१ गते (सन् २०२१ मे४ तारिख) मंगलबार
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार ०६:०७
पुर्पुरोमा जे लेखिए पनि भाग्यसँगै कर्म गरौं । यतिखेर समुदायस्तरमै कोरोना भाइरस फेरी विगत झै आउने तरखरमा रहेको छ । विभिन्न पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सरोकारवालहरुले कोरोनाको प्रभावबाट बच्न दिएको विभिन्न सन्देशमूलक सूचना, स्वास्थ्यमापदण्ड तथा सचेतनामा ध्यान दिऔं । आफू सुरक्षित रहे परिवार, समाज र देश सुरक्षित रहन्छ ।
मेष – समय शुभ फलदायी रहनेछ । कर्ममा सफलता प्राप्त हुनेछ । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । सुख आरोग्यता बढ्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछन् । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । रसविलासमा रुचि बढ्ला । मान–सम्मानमा ध्यान राख्नुपर्ला । घरपरिवारको स्थिति अनुकूलै रहला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । सुख–सुविधाको वस्तु बढ्नेछन् । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ ।
बृष – समय शुभ र भाग्यवर्द्धक रहनेछ । अन्नधन बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । उधारो लगानी लगाइएको धन उठ्नेछ । रोकिएको काम बन्नेछ र नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । विकासको पथ बलियो बन्ने छ । व्यापारिक क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक सुखशान्ति पनि प्राप्त होला । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । समयले साथ दिनेछ । विजयश्री प्राप्त होला । सुख-सुविधाको बस्तु बढ्नेछ । हरेक प्रकारले उत्थान होला ।
मिथुन – प्रेममा सफलताको लागि ध्यान दिनुपर्ला । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नुका साथै मित्रजनको साथ प्राप्त हुनेछ । नयाँ-नयाँ काममा जोखिम नलिनु बेस हुनेछ । मान महत्व धन-सम्पत्ति सुख–समृद्धिमा कमी आउने छैन । विजयश्री मिल्नुको साथै वर्चस्व पनि बढ्ला । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्ला । पारिवारिक विकाससँगै कार्यक्षेत्रमा पनि सफल रहनुहुनेछ । दायित्वलाई पूरा गर्नुसँगै नयाँ दायित्वको पनि प्राप्ति होला । रोकिएको कार्य बनेर मन प्रशन्न भइहाल्नेछ ।
कर्कट – ग्रहगोचर अनुकूल फलदायक छ । शुभ कार्यमा सफलता मिल्नुसँगै विकासको काम पनि बन्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काममा रुचि बढ्नुसँगै यात्रामा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । मान सम्मान बढ्नुको साथै ख्याति पनि फैलिने छ । आरोग्यता बढ्नेछ । विकासको नयाँ नयाँ बाटो देखापर्ला । सुखशान्ति बढ्नेछ ।
सिंह – विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ने छ । आशा उत्साह थपिनेछ । स्वास्थयमा सुधार आउनेछ । नियम कानुनको साथ प्राप्त हुनेछ । योजना र बजेट बनाई कार्य गर्नु बेस रहला । उच्चाधिकारीहरूसँगको व्यवहारमा यस मिल्नेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ । भागदौड व्यस्तता जारी रहनेछ ।
कन्या – सुख-समृद्धि धन यश बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्नुको साथै नयाँ कार्यमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ । साझेदारीको कार्य बन्नुको साथै नयाँ-नयाँ कार्यमा पनि प्रगतिको बाटो बलियो बन्ने छ । जीवनसाथीको सुख सहयोग पाउनुहुनेछ । रस रागमा आकर्षण गर्नेछ । मिठो भोजन पाउनुहुनेछ । मान प्रशंसा होला । ख्याति फैलिनेछ । सुख-शान्ति बढ्ला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखन-प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ ।
तुला – ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बन्ने छ । आफन्तको सहयोग मिल्नुको साथै शत्रुलाई पनि जित्नुहुनेछ । रोकिएको काम बन्नेछ र नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । विजयश्री मिल्नुको साथै सुख-समृद्धि पनि बढ्नेछ । आलस नगरी समयबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुहोस् । घरपरिवारको स्थितिमा सुधार हुनुको साथै कार्य व्यापारमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । मान महत्व पुरस्कार पाउनुहुनेछ ।
वृश्चिक – आजको समय प्रेमको क्षेत्रमा सफलता पाउनको लागि अत्यन्तै अनुकूल छ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । इष्टमित्र सन्तान आदिद्वारा सहयोग मिल्नेछ । कला साहित्य संगीत गीत रसरागसित सम्बन्धित कार्यमा सफल रहनुहुनेछ । रचनात्मक र कलात्मक कार्यमा सफलताको साथै साथीभाइबीच आमोदप्रमोद हुनेछ । आनन्द बढ्नेछ । प्रेमपात्रको साथ पाइनेछ ।
धनु – देखापरेको समस्याको समाधान मिल्नेछ । आम्दानी बढ्नेछ । यात्रा हुनेछ । भागदौड र व्यस्तता बढ्नेछ । अरूको भरमा बस्नु उचित हुने छैन । आफ्नै बल विवेकले काम गर्नु बेस रहला । विवाद आदिका समाधान प्राप्त हुनेछ । ठूलो रकमको लगानीको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कागजपत्र माथि हस्ताक्षर गर्दा सचेत रहनुपर्नेछ । आयस्रोत बढ्नाले आर्थिक समस्या समाधान हुनेछ ।
कुम्भ – बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्ने छ । दायित्व पूरा गर्नुहुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । भोजभतेरमा भाग लिनुहुनेछ । आर्थिक वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । सभा र समारोहमा मान पुरस्कार प्राप्ति होला । दरिद्री भागेर आर्थिक उत्थानको बाटो देखापर्ला । उच्चाधिकारीको साथ मिल्नेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । गौरव बढ्नेछ ।
अघिल्लो लेखमाप्रदेश १ बाट सोमबार थपिएका ६०७ संक्रमित मध्ये मोरङ, सुनसरी र झापाबाट ५३४, विराटनगरबाट मात्र २ सय २६ जना संक्रमण
अर्को लेखमाकाठमाडौंमा शव व्यवस्थापनमा कठिनाई, विद्युतिय शवदहनले नधानेपछि वागमतिमै जलाउन थालियो शव